Kumanaan Pakistaaniyiin ka careysay dilka Osama Bin Ladin oo isgu soo baxay(Sawiro) – SBC
Kumanaan Pakistaaniyiin ka careysay dilka Osama Bin Ladin oo isgu soo baxay(Sawiro)
Kumaanan qof oo reer Pakistan ayaa isagu soo baxay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan wadanka Pakistaan kuwaasi oo si weyn uga soo horjeeday weerarkii Mareykanku ay sheegeen inay ku dileen hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida Osama Bin Ladin.
Magaalada Quetta waxaa isagu soo baxay kumanaan qof kuwaasi gubay calanka Mareykanka isla markaana ku dhawaaqayey ereyo Mareykan diid ah. Quetta oo ah caasimada gobolka Koonfur Galbeed ee Baluchistan ee dalka Pakistaan waxaa dadkii isagu soo baxay banaanbaxa hogaaminayey hogaamiyeyaal diimeed iyo xubno ka mid ah siyaasiyiinta wadankaasi iyadoo uu ka dhex muuqdey Maulawi Asmatullah oo ka mid ah sharci dajiyeyaasha wadankaasi. “Bin Laden wuxuu ahaa geeisiga muslimiinta aduunka ka dib shahiidnimadiisa wuxuu qaatey magaca mujaahidka weyn ee muslimiinta” sidaasi waxaa yiri Asmatullah oo ay soo xiganaysay wakaalada wararka ee AFP.
“Shahiidnimadiisa ma dhameyn doonto dhaqdhaqaaqa wayna socon doonto waxaana jiri doona kumanaan Bin ladin ah oo dhalan doono” ayuu hadalkiisa ku darey Asmatullah. Ka qayb galayaasha banaanaxyada waxay si weyn ugu dhawaaqayeen ereyo ay ugu hayeen taageero dhaqdhaqaaqa Taliban Mulah Omar, kaasi oo ka dagaalamaya xuduuda Pakistan & Afgaanistaan tan iyo markii Mareykanku uu bilaabay faragalinta military ee ka dhanka ah Taliban sanadkii 2001-dii xiligaasi oo ay diideen in ay soo dhiibaan Osama Bin Ladino o marti u ahaa.
maansha allah waa dad muslim ah oo iimaan koodu buuxo bal fiirsha allah baan idinku dhaarshaye wixii ay ku hadleen shariif tuke horjoogaha beelaha hawiye iyo dhiigyo cab horjoogaha beelaha isaaq siilaanyo